Chromatin: rafitra sy asa
Ny Chromatin dia miorina ao amin'ny efitranon'ny selamantsika
Ny chromatine dia karazana fitaovana misy ny ADN sy proteinina izay mandoro ho an'ny chromosomes mandritra ny fizarana sela eukaryotic. Ny Chromatin dia miorina ao amin'ny efitranon'ny selamantsika .
Ny singa fototra voalohany amin'ny chromatin dia ny famoretana ny ADN ao anaty vondrona mangatsiaka izay tsy dia misy volavolan-dalàna ary mety hiditra ao anatin'ny sehatry ny nucleus. Ny Chromatin dia ahitana ireo siramamy madinika antsoina hoe histones sy DNA. Ny histones dia manampy amin'ny fikarakarana ADN ho rafitra antsoina hoe nucleosomes amin'ny fanomezana fototra iray izay ahafahan'ny ADN mifamatotra.
Ny nucleosome dia avy amin'ny dingan'ny ADN eo amin'ny taham-pahaizana 150 eo ho eo izay mifatotra manodidina ny tantara miafina valo antsoina hoe octamer. Ny nucleosome dia mitambatra kokoa hamokarana fibre chromatin. Ny fibre chromatin dia voapetaka sy mifangaro mba hamorona chromosome. Ny Chromatin dia mahatonga ny sela maromaro hipoitra, toy ny DNA , kopia , ADN, ary ny fizarana sela.
Euchromatin sy heterochromatin
Ny chromatin ao anaty efi-trano dia mety ahitam-panafana amin'ny ambaratonga samihafa arakaraky ny sehatr'ilay sela ao amin'ny fihodinan'ny sela . Ny chromatine ao amin'ny afobe dia misy euchromatine na heterochromatin. Amin'ny fizotran'ny tsingerina dia tsy mizara ny sela fa mitohy ny fitomboan'ny vanim-potoana. Ny ankamaroan'ny chromatin dia amin'ny endrika tsy dia mazava tsara fantatra amin'ny hoe euchromatin. Ny ADN dia mibaribary amin'ny euchromatin izay mamela ny replication sy ny transcription ADN. Mandritra ny transkripsyon, ny helikoptera double ADN dia manjavona ary manokatra ny mamela ny fototarazo ho azo ampiasaina ho proteinina .
Ny DNA-replication sy ny transcription dia ilaina amin'ny sela mba hampifanaraka ny ADN sy proteinina ary organelles ho fiomanana amin'ny fizarana sela ( mitosis or meiosis ). Ampahany kely amin'ny chromatinina dia misy heterochromatine mandritra ny ditra. Ity chromatin ity dia voaroba mafy, tsy mamela ny fototaraso ny firaisana.
Ny heterochromatin dia mibontsina kokoa amin'ny loko toy ny euchromatin.
Chromatin ao Mitosis
Mandritra ny faminaniana momba ny mitose dia lasa mihodina amin'ny chromosomes ny fibre chromatin. Ny chromosome naverina tsirairay dia ahitana chromatidra roa miray tsikombakomba.
Mandritra ny metaphase, dia mihalasa be dia be ny chromatine. Ny chromosome dia miforitra eo amin'ny takelaka metafasy.
Mandritra ny anaphase, ny chromosomes miara-dia ( chromatidin'ny anabavy ) dia misaraka ary voasariky ny mikrôpitaly mihodinkodina mankany amin'ny faran'ny sela.
Ao amin'ny telophase, ny chromosome zanakavavy vaovao tsirairay dia misaraka amin'ny taranany. Ny fibre chromatin dia tsy mitongilana ary lasa mihena. Taorian'ny cytokinesis, dia misy sela tokana misy sela mitovy tantely. Ny sela tsirairay dia mitovy amin'ny isan'ny chromosomes. Ny chromosomes dia mitohy tsy mitongilana ary manitatra ny famokarana chromatin.
Chromatin, Chromosome, ary Chromatid
Matetika ny olona dia manana olana amin'ny fanavahana ny fahasamihafana eo amin'ny teny hoe chromatine, chromosome, ary chromatid. Na dia misy ADN sy rafitra telo hita ao aza, dia voafaritra manokana ny tsirairay.
Ny Chromatin dia ahitana ADN sy histônôma izay voafafy ao anaty fasika malefaka sy mitongilana. Ireo chromatin fibre dia tsy voahondina nefa afaka misy na dia endrika miavaka (heterochromatin) na endrika kely (euchromatin) aza.
Ny processus misy ny replication, ny transcription, ary ny rekombin 'ny DNA dia hita ao amin'ny euchromatin. Mandritra ny fizarana sela, ny chromatin dia mitambatra mba hamorona chromosomes.
Ny chromosome dia singa mifangaro vongan-tsiranoka vita amin'ny chromatin. Mandritra ny fizotry ny fizarana sela mitoseosis sy miosezy, dia mamerina ny chromosomes mba hiantohana fa ny sela vaovao tsirairay dia mahazo ny isa feno chromosomes. Ny chromosome duplicated dia double stranded ary manana ny endrika X famaritana. Ny tady roa dia mitovy sy mifamatotra amin'ny faritra afovoany antsoina hoe centromere .
Ny chromatid dia iray amin'ireo kofehy roa amin'ny chromosome averina. Ny kromatida mifandray amin'ny centromere dia antsoina hoe chromatida anabavy. Any amin'ny faran'ny fizaran'ny sela, ny chromatidin'ny anabavy dia misaraka ho lasa zanaka kômôôôma ao amin'ireo cellules famolavolana vaovao.
Cooper GM. Ny sela: fomba fiasa madinika. 2 edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2000. Chromosome sy Chromatin. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9863/
"Chromatin." Fanabeazana Home Genetics. Updated 15 febroary 2016. http://ghr.nlm.nih.gov/glossary=chromatin.
Fahatakarana ny Code Genetika
Allele: Famaritana ny Genetics
Fametavetana ara-nofo: karazana fangaro
Ny tombontsoa sy ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy
Ardas voafaritra: Ny fomba fanalahidin'ny vavaka fangatahana Sikh
Periodes de la Cenozoic Era
Fampiasana Pagety sy Puppies
Ny fijalian'i Kristy
Fampandrenesana evolisiona maoderina
Inona ny Youki?
Ny karazana kangoroa
Bodista sy Metaphysika
Ireo horonantsary horonantsary henjana indrindra
Ny maha-olombelona sy ny fanavaozana
Fandresen-dahatra ny W
Ny Oniversiten'i Belmont GPA, SAT sy ACT Data
Rye - Ny Tantaram-pianakaviana Tantaram-pianakaviana
Structures chimiques manomboka amin'ny taratasy Z
Ny Ady Lehibe Faharoa: Messerschmitt Bf 109
Ny sarin'i Shirley Graham Du Bois
Fomba 10 hamonjena ny vola ao amin'ny fandaharam-pianarana ho an'ny sekoly Alahady
Espaniola-Anglisy Glossary amin'ny ordinatera sy Internet